आजभोली पुरुषको लागि बलात्कार गर्नु दालभात खाए जस्तै हो - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
आजभोली पुरुषको लागि बलात्कार गर्नु दालभात खाए जस्तै हो
घ. १६ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलासँग अनुमति नलिएर,ङ. डर देखाएर, धम्काएर, कुनै नशालु पदार्थखुवाएर, झुठ बोलेर, जर्बजस्ती गरेर, छद्मभेष बनाएर कुनै बालिका वा महिलालाई,
हादिसमा लेखेको छ–‘श्रीमान यदी श्रीमतिलाई यौन सम्पर्कको लागि बोलाउँछ भने, श्रीमति त्यतिबेलै श्रीमान कहाँ जानु पर्छ,नत्र भने,त्यो रात उनको लागि भयानक गालिद्वारा विताउनु पर्नेछ’श्रीमान मालिक हो, भने श्रीमति उसकी दास, त्यसैले हादिसको निर्देशन शिरोधार्या छ नत्र मान्छेले जुरिसप्रुडेसको आधुनिक कानून नै मान्नुपर्छ ।
समाजमा यी सबै तर्कको धेरै सम्मान गरिन्छ । यदि एक महिला अथवा केटी आफ्नो इच्छा अनुसारको कपडा लगाउँछे, हाँस्छे, हिड्डुल गर्छे भने, त्यसै कारणले उ बलात्कारको शिकार हुनु पर्ने ? यो किन ?महिलामाथि थोपरेका यी सबै निरर्थक तर्क त, छँदैछन्, त्यसैमाथि साक्षि–सबुतको झमेला पनि छ । बलात्कार कसैले साक्षि राखेर गर्दैन । तरपनि साक्षिको खोजी गरिन्छ । एक महिलाको साक्षि र बयानले पुग्दैन । दुई महिला चाहिन्छन् । जहाँ एक पुरुषले काम चल्छ तर महिला दुई नभएमा त्यसलाई प्रमाण मानिदैन ,किनकी यस देशको कानूनमा दुई महिला एक पुरुष बराबर हुन्छन् ।
म यौन–स्वाधीनतामा विश्वास गर्छु । अन्य स्वतन्त्रता झै मान्छेलाई यो स्वतन्त्रता आवश्यक छ । जबरजस्ती किन गर्ने ? महिला भिखारी होस् अथवा चरित्र हिन, यदि उ इच्छुक छैन भने, उसलाई छुने कसैको हक हुन्छ ? हुदैन । राज्यको विचारमा बलात्कारी पटक–पटक बाँच्छन् । यसमा देश नै महिलाको नागरिक अधिकारमाथि थुक्छ । यति हुँदापनि यस देशकी महिला मुख खोलेर बलात्कारीलाई आजीवन कारावासको सजायको लागि आवाज उठाउँदैनन् र आन्दोलन गदैनन् भने मैले भन्नै पर्छ ति निर्बोध महिला शायद मनमनै बलात्कारको शिकार हुन चाहन्छन् । आईमाईको कुनै देश हुँदैन नामक पुस्तकबाट साभार
कमरेड प्रचण्ड,जीवनभर एउटै पदका लागि कतिपटक पार्टी फोड्ने ?